Abakhiqizi be-Roller Bearing, abahlinzeki - China Roller Bearing Factory
● Ingabe amabombo ahlukaniswayo anomgwaqo weteyiphu emasongweni angaphakathi nangaphandle wamabhere.
● Ingahlukaniswa ngomugqa owodwa, umugqa ophindwe kabili nemigqa emine yomugqa we-tapered roller ngokuya ngenombolo yama-roller alayishiwe.
● Amarowu we-roller tapered roller ayimigqa ehlukaniswayo.
● Ingafakwa kalula kumagazini kanye nasisekelo sokwakhiwa.
● Ingamelana nomthwalo we-axial ohlangothini olulodwa. Futhi kungakhawulela ukufuduka kwe-axial kwesihlobo kusondela esihlalweni sokuthwala ngakunye.
● Isetshenziswa kakhulu ezimotweni, ezimayini, izinsimbi, imishini yepulasitiki nezinye izimboni.
Irowu Double Tapered Roller Bearings
● Amaringi ama-tapered roller bearings awakhiwe ngendlela ehlukahlukene
● Ngenkathi ithwala umthwalo osabalalayo, ingathwala umthwalo we-axial ohlangothini
● Imithwalo ye-radial ne-axial ehlanganisiwe nemithwalo ye-torque, ekwazi kakhulu ukuthwala imithwalo emikhulu ye-radial, isetshenziswa kakhulu ezintweni ezikhawulela ukufuduka kwe-axial kuzo zombili izinkomba ze-shaft nezindlu
● Ifanele izinhlelo zokusebenza ezinezidingo eziqinile zokuqina. Isetshenziswa kabanzi kuhabhu lamasondo angaphambili lemoto
● Amarowu ama-tapered roller anamarowu amane anezinhlobonhlobo
● Ukufakwa okwenziwe lula ngenxa yezinto ezimbalwa
● Ukusatshalaliswa kwemithwalo yama-rollers amane emigqa kuthuthukisiwe ukunciphisa ukugqokwa nokwelula impilo yenkonzo
● Ngenxa yokwehliswa kokubekezelelana kobubanzi bendandatho yangaphakathi, ukuma kwe-axial entanyeni ye-roll kwenziwa lula
● Ubukhulu buyafana nobezinsimbi ezijwayelekile zemigqa emine ezinamathele ngamaringi aphakathi nendawo
● Isakhiwo sangaphakathi samabheringi e-cylindrical roller sisebenzisa i-roller ukuthi ihlelwe ngokufana, futhi indawo yokugcina isikhala noma indawo yokuhlukanisa ifakwa phakathi kwama-roller, angavimbela ukuthambekela kwama-roller noma ukungqubuzana phakathi kwama-roller, futhi kuvimbele ngempumelelo ukwanda ye-torque ejikelezayo.
● Umthamo omkhulu wokulayisha, ikakhulukazi ophethe umthwalo osabalalayo.
● Umthamo omkhulu wokuthwala osabalalayo, ofanele umthwalo osindayo nomthwalo womthelela.
● I-coefficient ephansi yokungqubuzana, elungele isivinini esikhulu.
Umugqa owodwa we-Ryller Roller Bearings
● Irowu eyindilinga eyindilinga eyodwa ethwala kuphela ngamandla e-radial, ukuqina okuhle, ukumelana nomthelela.
● Ilungele imiphini emifushane enezinsimbi eziqinile, imiphini enokufuduswa kwe-axial okubangelwa ukunwebeka okushisayo, nezinsimbi zomshini ezinamabheringi atholakala ukufakwa nokuqaqeka.
● It is ikakhulukazi esetshenziselwa motor enkulu, umshini ithuluzi lokuphotha, injini ngaphambili nangemuva shaft ukusekela, isitimela kanye nomgibeli imoto asi asi shaft, udizili crankshaft, imoto ugandaganda gearbox, njll
Irowu Double Silinda Roller Bearings
● Inembobo yangaphakathi eyindilinga nomgodi wangaphakathi oyindilinga izakhiwo ezimbili.
● Inezinzuzo zesakhiwo esihlanganisiwe, ukuqina okukhulu, amandla amakhulu wokuthwala kanye nokuncipha okuncane ngemuva kokuthwala umthwalo.
● Ingakwazi futhi ukulungisa ukususwa kancane futhi yenze lula isakhiwo sedivayisi yokubeka ukufakwa okulula nokuqaqa.
Amarowu amane we-Ryller Roller Bearings
● Amarowu amane e-roller cylindrical roller anokungqubuzana okuphansi futhi alungele ukuzungezisa isivinini esikhulu.
● Isetshenziswa kakhulu emishinini yokugaya okugayo okufana nesigayo esibandayo, isigayo esishisayo nesigayo se-billet, njll.
● Ukuthwala kungokwesakhiwo esihlukanisiwe, izindandatho eziqukethe izindandatho zomzimba ezigoqekayo zingahlukaniswa kahle, ngakho-ke, ukuhlanzwa, ukuhlolwa, ukufakwa kanye nokuhlukaniswa kokuthwala kulula kakhulu.
● Inomthelela omkhulu
● Axial umthwalo
● Ijubane liphansi
● Ungaba nokuphambuka
● Isicelo: amathuluzi wemishini izimoto namaloli amancane amaloli, ama-trailer namabhasi ngamasondo amabili nantathu